Zeziphi iimpahla eziza kuseta imeko yokuwa kwaye awazi? | IBezzia
USusana godoy | 07/10/2021 12:37 | Ndinxiba ntoni
Ikwindla lifikile, nangona kwezinye iindawo kungabonakali ngathi linjalo kuba ilanga liyaqhubeka likhanya ngendlela engazange ibonwe ngaphambili. Kodwa Lixesha lotshintsho, egumbini kunye nokufumanisa ukuba yeyiphi na impahla eza kuseta lo mkhuba. Kungenxa yokuba mhlawumbi abanye bethu sele bebabona kwiifestile zevenkile zethu esizithandayo, kodwa abanye abaninzi bayakothusa.
Ewe asifuni kuphazamisa naluphi na uhlobo lokumangaliswa, nangona kule meko phantse kufanelekile. Kuba sikutyhilela zonke iimpahla oza kuzinxiba kunye nokunye okuninzi, Ngaphandle kokulibala izinto eziza kubakhombisa nangakumbi. Ngaba ukulungele ukufumanisa yonke inyaniso kwaye akukho nto ngaphandle kwenyaniso?
1 Zeziphi iimpahla eziza kuseta ukuwa oku?
2 Iibhulukhwe zomlenze ezibanzi ezingasokuze ziphoswe
3 Iidyasi ezinkulu okanye iingubo zomsele
4 Iingubo ezimfutshane ezineebhutsi zeenkomo
5 Intamo yosana ifika kwakhona ilungele ukuringa
6 Zonke iimpahla 'zokuprinta izilwanyana'!
Zeziphi iimpahla eziza kuseta ukuwa oku?
Ngaba unayo iblawuzi yothando? Ngaba inayo isaphetha entanyeni? Emva koko unayo enye yeengubo eziza kuseta umkhwa ngeli xesha lonyaka litsha. Ewe umoya wothando uhleli phezu kweempahla zethu ngendlela elula, iipateni ezithambileyo kunye nemibala ye-pastel. Kodwa kukho enye inkcaza engenakuphoswa kwaye kukuba nangona iiblawuzi zisesinye seengubo ezisisiseko, isaphetha esihamba entanyeni asikho mva kakhulu. Ukufumana isitayile sasemini esiqhelekileyo okanye mhlawumbi, ngeebrashi ezisesikweni xa usongeza izixhobo ezizifunayo. Ungayithenga yonke le nto ngaphandle kokushiya isofa yakho, ukusuka kwiiblawuzi, ukuya kwingxowa elula kunye nefayile ye- izihlangu kwi-intanethi. Kungenxa yokuba ziindlela eziza kuwe ngokukhawuleza. Ngaba ayisiyondlela ilungileyo yokuthenga kule mpelaveki?
Iibhulukhwe zomlenze ezibanzi ezingasokuze ziphoswe
Nangona iblukhwe ebhityileyo sesinye sezitshixo kwifashoni, ngamanye amaxesha abo bakhuphisana nabo njengebhulukhwe yemilenze ebanzi nayo iyaphuma.. Siyabazi kwaye balapha ukuhlala. Ngabo, isitayile siqinisekisiwe kwaye ungabadibanisa nomoya omnandi ngakumbi, ngakumbi ukuba ukongeza izihlangu eziphakamileyo. Nangona baya kulungeleka ukuba bakwazi ukunxiba iibhutsi zamaqatha okanye izihlangu zesitayile. Imikhwa yokuwa ibonakala ngathi masikhethe isimbo sethu kunye nentuthuzelo!
Iidyasi ezinkulu okanye iingubo zomsele
Sihambile ngexesha apho izincedisi ze-XXL zazingookumkani. Njengokuba, ngoku ubungakanani obaneleyo budlula ezandleni zeebhatyi kunye neebhatyi zomsele. Ezimbini zeengubo ezisisiseko xa kusondela ingqele, kodwa ngeli xesha azizi nokusikwa okuqinileyo, kodwa uya kuzibona zibanzi kakhulu kunangaphambili. Ewe ungonwabela ukhetho olukhulu lwemibala kuzo zombini, kunye neepateni. Khumbula ukuba iibhatyi ezitshekhiweyo zisese 'kufuneka' esingafanele sizilibale.
Iingubo ezimfutshane ezineebhutsi zeenkomo
Ifashoni yee-70s, inaleyo Umoya we-retro, siyiphinda kwakhona kwaye iyinto esiyithandayo. Kuba siyonwabele xa ishumi leminyaka elidlulileyo likhona kwakhona kwiintsuku zethu. Kule meko, iilokhwe ezimfutshane nezishicilelweyo esizinxibileyo ehlotyeniBesegumbini lethu lilungele ukuphuma. Kodwa kule meko, ilungelelaniswe nexesha lonyaka kwaye ke, iya kuba ziibhotshi zeenkomo ezivumayo ukuvumela ukuba zidityaniswe nazo. Qala ukunyathela kwezi nyanga!
Intamo yosana ifika kwakhona ilungele ukuringa
Ayiloxesha lokuqala ukuba siyibone ngeebhatyi, iijezi okanye iimpahla zangaphandle. Kodwa kubonakala ngathi iyakuphinda ibe phakathi kweengubo eziza kuseta ukuwa kwe-2021. Njengoko uyazi, yikhola emele ngaphezulu kwengubo ekuthethwa ngayo. Kuba inesiphelo esibanzi, ihlala inombala owahlukileyo kwaye inokugcwala ngeenkcukacha ezisikiweyo, Iinkcukacha ngeentsimbi zerhinestones okanye ngentambo eyahlukeneyo. Khumbula ukuba ngeli xesha lonyaka umbala weorenji unxityiwe kwaye mhlawumbi, unokufumana ikhola yosana kwingubo ephezulu yaloo mbala.
Zonke iimpahla 'zokuprinta izilwanyana'!
Ayisothusi ngolu hlobo, kuba ubuyilindele kwaye siyayazi. Ngexesha ngalinye lonyaka simangalisiwe nangakumbi, intsha iimpahla ezinoshicilelo lwezilwanyana. Kodwa ekwindla baba sisiseko ngakumbi kuba bathambekele ekujoyineni imibala yexesha, iithoni zomhlaba okanye ezisisiseko esimnyama namhlophe. Nokuba kungayintoni na, ungonwabela iilokhwe, iblukhwe okanye iibhatyi ezinestampu. Ngoku akusafuneki ukuba uzibuze ukuba zeziphi iimpahla eziza kubeka olu hlobo lokuwa, kuba sikutyhilele!
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » fashion » Ndinxiba ntoni » Zeziphi iimpahla eziza kuseta imeko yokuwa kwaye awazi?
Uyicoca njani isofa yesikhumba